UAndaman NgeSiqithi saseHavelock
Amabhantshi ahlambulukileyo, amanzi e-crystal ecacileyo kunye nenye imbali yenza i-Andam ikhethekileyo ekhethiweyo, ikhefu elonwabileyo, kunye nohambo olude, lugxuma kwiindawo ezisemanxwemeni kunye nelokuba lukwazi ukuhamba ngokudityaniswa kolwandle. Ukusuka edolophini yezobugcisa bePort Blair ukuya kwiindawo ezinxwemeni ezimhlophe zaseNeil naseHawaick Islands kunye nemingcwaba ye-limestone ye-Diglipur, i-Andamans inika into kubo bonke abatyelelo. Inamanye amabini amahle e-Asia aphuma ngaphandle kwefilimu ye-paradesi ye-tropical okanye ikharityhulam yokuhamba. Ezi qela zeIqhingi zingenye yeendawo ezikude kakhulu emhlabeni. Olu hambo luza kukunika ithuba lokuphanda kwii-bhendi kwaye ube nekhefu eliphumayo.
Iimpawu ze-05 / iintsuku ze-06 | Ikhowudi yoKhenketho: 030
USUKU 01: IPHEPHA YOKUPHILA
Xa sifika kwisiza sezindiza sasePort Blair, ummeli wethu uya kufumana aze ahambise ehotele. Emva kokungena kwihotele kunye nokukhululeka, siza kuqala ukujonga indawo kunye ne-Anthropological Museum, ebonisa izixhobo, indawo yokuhlala, ubugcisa kunye nezixhobo zokuzibandakanya ezizweni zase-Andaman naseNicobar kwiiMveli ze-Anthropological Museum, siya ku-Corbyn's Cove elunxwemeni. Umboniso oKhanya kunye oMboniso kwiJaji leSelfowuni: Ngokuhlwa, sihamba kwiMboniselo yokuKhanya kunye neNgcaciso kwiJaji leSelfowuni apho i-saga yomzabalazo wenkululeko ifakwe.
USUKU 02: IPORT BLAIR - ISLANDO SASI-ROSS - ISLANDI YASE-NORTH BAY (ISLANDO SASE-CORAL)
Namhlanje, emva kwesidlo sakusasa siza kuhamba ngokuya kwi-Ross Island, eNorth Bay (eCoral Island) naseViper Island (i-Harbour Cruise). Isiqithi saseRoss: Okokuqala siqala uhambo olumnandi (ngesikebhe) kwiRoss Island, eyinkunzi enkulu yasePort Blair ngexesha lolawulo lwaseBrithani, ngoku limelela into emangalisayo, kunye nesakhiwo esingaba se-debris. Imyuziyamu encinci ibonisa iifoto kunye nezinye izinto zokulwa neBritishers, ezifanelekileyo kwezi ziqithi. I-North Bay (iCoral Island): Ukusuka eRoss Island, siya kuhambo oluvuyisa kwisiqithi saseNorth Bay (iCoral Island) sinika i-coral esiqhekezayo, iintlanzi ezinemibala kunye nolwandle oluphantsi kwamanzi. Siyakwazi ukujonga ezi ngqamlezo zombala zaselwandle kunye namanzi angaphantsi kwamanzi ngeeklasi eziphantsi kwesinqanawa kunye ne-snorkeling (ngokuzikhethela). I-Harbour Cruise (Isiqithi saseViper): Ngobusuku, siqhubela ukuhamba ngeenqanawa ezikulo, ukujonga kwiphondo yeendawo ezisixhenxe ukusuka kolwandle, oko kukuthi i-harbor, ii-docks ezijikelezayo, njl njl phakathi nohambo oluya kwisiqithi saseViper kwindawo yokusebenza.
USUKU 03: IPORT BLAIR - ISLANDO SOKUQALA
Namhlanje, siqala uhambo lwethu oluya eHavelock Island ngesikebhe ukusuka ePort Blair Harbour. Xa sifika eHavelock Island, ummeli wethu uya kufumana kwaye anikezele ukuba ungene kwi-resort. Imisebenzi yokuzonwabisa yokuzikhethela e-Havelock Island: Uhambo lwe-Snorkeling oluya kwi-Elephant Beach: I-Rs.750.00 Ngomntu (kubandakanya i-Private Boat, i-Guide & Snorkeling izixhobo)
USUKU 04: HLAWULA ISLANDI- IPORT BLAIR
Emva kwesidlo sakusihlwa, siya kwiRabhananagar Ibhitshi (i-Beach No. 7), i-Times Magazine ibhala elwandle olugqibeleleyo phakathi kweelwandle ezilungileyo kakhulu e-Asia. Yindawo efanelekileyo yokubhukuda, ukuhlamba elwandle kunye nokukhwabanisa elwandle. Emva kwemini siya kuPort Blair (nge-ferry) kunye nokuhlala ubusuku ePort Blair.
USUKU 05: IPORT BLAIR - ISIXEKO SOKUKHUBA - ISITHETHO
Emva kwesidlo sasekuseni, sithatha uhambo lwenkqantosi yasePort Blair ejongene neJaji leSelfowuni (iSikhumbuzo seSizwe), iChatham yabona ilitye (i-oldest and largest mill) e-Asia), i-Forest Museum, iSamundrika (iMountain Marine Museum), iSikoli seNzululwazi, iGandhi Park , IMark Park, i-Andaman Water Sports Complex. Uthengwa: Kusihlwa, siya ku-Sagarika (i-Govt. Emporium ye-Handcraft) kunye nemarike yendawo yokuthenga.
USUKU 06: UKUSUKA KWI-ANDAMAN ISLANDS
Yehla ePort Blair / Harbour yohambo lokubuya kunye neenkumbulo zeeholide ezimangalisayo.